Digriyow Iyo Heestiisa Cusub Oo Soo Baxday Iyo Nabiil Oo Kusoo Bandhigay Hab Duubis Casri Ah
Heestan oo magaceeda la isku qolaafay balse aan fanaanka afkiisa ka hayno TIQRAAR waa mid kamid ah runtii heesaha sanadka marka laga fiiriyo dhan walba, Ereyo, Laxan, Cod, Musig iyo weliba duubista filimka.
Digriyow oo kamid ah kooxda caan baxday ee Waayahacusub waxa uu marka ku heesayaa hees caadi ah oo markiisii hore looga bartay nooca heesaha loo yaqaan Rap, waxa uuna muujiyay sida uu ugu wanaagsanyahay nooc walba oo hees ah weliba jilida heesaha.
Heestan Tiqraar waxaa ereyada iyo laxankaba sameeyay nin aan dhihi karno waxa uu kamid yahay mucjisooyinka fanka cusub ee dadkeena waa Saalax Doonyaale oo horey usoo sameeyay heeso kala daran.
Musiga heestan waa fanaanka iyo musigyahanka weyn Abdihakin Ciise Geedi Farayare oo isna laf dhabar u ah horumarka fanka cusub ee sii laba kacleynaya. ugu danbeyn waa Nabil Nuur iyo Maanta Media Production oo duubay, farsameeyay soona saaray muuqaalka qurxoon ee heestan, waxaana leenahay dhamaan inta gacanta ka geysatay heestan hambalyo iyo inaad dadaalkiina halkiisa kasii wadaan.
Fiirso heesta Tiqraar.